इटहरीमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा : डा दाहाल | www.itaharifm.com.np
गृहपृष्ठ » सम्वृद्धि यात्रा » इटहरीमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा : डा दाहाल
Posted by Itahari Fm | error | ४५१ पटक
इटहरी शैक्षिक र ब्यबसायीक हीसाबले पुर्बमै उदाउदो छ । गुणस्तरीय शिक्षाकालागि बडे बडे कलेजहरु छन् । ब्यबसायीक हीसाबले बडे बडे भवनहरु इटहरीमा थपिइ रहेका छन् । सामाजीक संघसंस्थाको भुमिका दीनहु बडिरहेकोछ । तर पुर्बको केन्द्र इटहरीमा सबैखाले सुबिधा पाइने एउटा पनि ठुलो अस्पतालचै बन्दै बनेन । अनी रोटेसनमा डाक्टर आउने क्लीनीक थपिएका थपिएकै छन् । यस्तो चौबाटो अनी यतिका क्लीनीक चल्ने ठाँउमा एउटा हस्पीटल नबन्ने तर साना साना क्लीनक चै कीन थपिएका थपीयै गरेका होलान ? यो आम जिज्ञासाका बिच केही समयदेखि एक जना बिशेषज्ञले इटहरीमा नियमित स्वस्थ्य सेवा दीन थालेको सुखद खबर पनि छ । इटहरीको नेहा अस्पतालमा नियमित बिशेषज्ञ सेवा दीने डा बद्री प्रसाद दाहालसंग इटहरीको स्वास्थ्य अबस्थका बारेमा हामीले कुराकानी गरेकाछौ । प्रस्तुत छ कुसल राइले डा दाहालसंग गरेको कुराकानीको संपादीत अंश ।
डाक्टारसाब तपाई पृष्ठभुमी बताइ दिनुस न ।
मेरो बाल्यकाल यहि सुनसरीको सोनापुरमा बित्यो । मैले सोनापुरकै बिद्यालयमा १ कक्षा बाट ८ कक्षा सम्मा पढे र पढ्दा खेरि म सधैँ कक्षमा प्रथम श्रेणिमा उत्रिण हुने गर्थे । यसै क्रम्मा दुईपटक जिल्ला प्रथम भए । त्यस पछि मेरा आफन्तहरुको सहयोग साथै गुरुवर्गहरुको प्रेरणले मलाई काठमाण्डौ गएर पढ्ने वातावारण मिल्यो र मैले ९ र १० काठमाण्डौमा पढेँ । म २०३३ सालको एस एल सी परिक्षामा बोर्ड थ्रड भए । त्यसपछि मलाइ चिकित्सा शास्त्रमा अध्यायन गर्न मन लाग्यो । म त्रिचन्द्र कलेज भर्ना भए । पहिलो र दोस्रो बर्ष गरि दुवै बर्षको परिक्षाको नतिजामा पनि अधिराज्यकै थ्रड भए । फलस्वरुप शिक्षा मन्त्रलाय आन्र्तगत छात्रवृत्ति पाएर श्रीलंकाको कोलम्वु विश्वबिद्यालय पढ्न गएँ र ७ बर्ष पछि एमबिबिएस पुरा गरेर नेपाल फर्के । फर्किसके पछि म बिएनबि हस्पिटलमा काम शुरु गरे । काम गदै जानेक्रममा फिजिसियन बन्ने इच्छा बढ्यो । बिर अस्पतालमा काम गर्दागर्दै मैले उत्कृस्ट नम्बर ल्याए पछि काठमाण्डौ मेडिकल कलेज मा टिचिङ्ग गर्न गए । बेलायतको मेम्बर अपÞm रोयल कलेज फिजिसियन एम आर सी पार्ट वन ब्रिटिस काउन्सीलमा जाँच दिए पछि मैले नाम निकाले । मेडिकल कलेजमा टिचिङ गर्दा गर्दै फेरी बेलायतमा ओभरसिज स्किन अफर थियो त्यहाँको एकजना डा मुटु बिषसज्ञले मेरो निम्ति सिफारिस गर्दिनु भयो र म पढ्न गए २ वर्ष पढेर एम आरसीपी गरेर म पुनः नेपाल फर्किए । फर्केर आए पछि काठमाण्डौ मेडिकल कलेजमानै पढाई रहेको थिए मेरा साथीहरुले काठमाण्डौ बाहिर जानु पर्छ भनि सकेपछि म पोखरा गएर पोखरा विस्वबिद्यालयमा पढाए । पश्चिमान्चल क्षेत्रीय गण्डकी अस्पतालमा २ वर्ष काम गरे । त्यसपछि म पाकिस्तानको काराँचीमा जिंगमेडिकलमा पोस्ट ग्राजुयासन गरे १ वर्ष पछि पोखरा गण्डकी अस्पतालमै काम गर्दै थिए यहि क्रममा इटहरीमा एपेक्स हस्पिटलका संचालकले मलाइ बोलाउनु भयो । साथै मेरो घर पनि यतै भएकोले म इटहरीमा आए एपेक्स हस्पिटलमा दुइ वर्ष सम्म काम गरेसकेपछी मैले आफ्नै म्यनेजमेन्टमा नेहा अस्पताल खोलेको छु यो इटहरीको बिपी चौक बिपी मार्गमा छ ।
तपाइको नेहा अस्पतालमा के के सुविधाहरु छन ?
म आफै नियमीत सेवा दीन्छु । नियमति बिशेषज्ञ सेवा दीने यस अस्पतालमा एक्सरे सेवा, भिडीयो एक्सरे सेवा, हाडजोर्नी, नशारोग, प्रसुती तथा महिला संबन्धि रोगहरु, डाइबिटिज, प्रेसर, सुगर, थाइरट आदी रोगहरुको राम्र संग उपचार गरिन्छ । साथै ७० बर्ष भन्दा माथीका बिरामीहरुलाई २०% छुट गरेकाछौँ ।
इटहरीमा बिशेषज्ञ सेवा दिनु भएको छ । सेवा गर्ने क्रममा बिरामी र उनका आफन्ताहरु बाट कस्तो ब्यबहार पाउनु भयो ?
म चिकित्सक भएको हैसियतले मकहाँ आएका बिरामीहरुलाई ठिक पर्नु मेरो कर्तब्य हो । त्यसैले मेरो दक्षता र अनुभवका आधरमा उपचार गर्छु तर आफुले राम्रै गरीरहँद बिभिन्न प्रकारका नकारात्मक आरोपहरु पनि खेप्नु पर्दछ । यस्तो अवस्थालाई सहन गर्दै आगडी बढ्ने गर्छु । किनकि डाक्टरहरुको जीवननै बिमारीहरुमा समर्पित भएर बाँचेर बचाँउनु पर्ने पेशा हो । यधपी म मेरो पेशामा आत्मा सन्तुष्ट छु । कतिपय बिरामीहरु ठिक भैसके पछि जसले खुशीका साथ धन्यवाद मात्र हैन मिठाई समेत खाना दिन्छन् जसले गर्दा मलाई आफ्नो पेशा प्रति गर्व लाग्छ
अहीले निजी स्कुल पढाउने र डाक्टर बनाउने भन्ने छ ।तपाइ सरकारी स्कुलबाट डाक्टर बन्नु भएको आइडल पर्सन है ?
यदि बोडिङ स्कुल पढ्दैमा सबै विद्घवान बन्ने भए त अधिकांशले सकिनसकी बोडीङ स्कुलकमा पढाएकैछन् । फेरी कति प्रतिसत सफल भएकाछन् मुख्य कुरा चाही बिद्यर्थीमा निर्भर हुन्छ । यद्यपी कुनै पनि बिद्यर्थी जेहन्दार छ र ठुलो लक्ष्य उदेश्य लिएर अर्थत म पढेर केहि गर्छु भनेर कम्मर कसेर पढेको खण्डमा उ सरकारी स्कुल पढेरै बिज्ञ बन्न सक्दछ । त्यसैले सरकारी स्कुल पढ्यो भने कम्जोर हुन्छ भन्ने कुरा यर्थत होइन ।
अन्त्यमा जाँदजाँदै इटहरी एफएम सुनिरहनु भएका स्रोताहरुलाई के भन्न चहनुहुन्छ ?
स्वास्थ्यनै धन हो र हामीले आफ्नो एकदमै ख्याल गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागी कम्तिमा ३÷३ महिनामा स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु होला । जसको लागी हाम्रो नेहा अस्पतालमा सुगर, प्रेसर निशुल्क रुपमा चेक गरिन्छ । साथै अन्य थुप्रै सेवा सुविधा उपलब्ध छ । नेहा अस्पतालमा आउनुहोस हामीलाइ पनि सेवा गर्ने मौका दिनुहोस । रोग लागेर सीकिस्तै भएर धेरै पिडित बनेर हस्पीटल धाउनु भन्दा रोेग लाग्नै नदिनु बुद्धिमानी हो ।